क्षति पुगेका सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न दुई अर्ब लाग्ने, कुन कुन आयोजनामा पुग्यो क्षति ?:: Artha Dabali
क्षति पुगेका सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न दुई अर्ब लाग्ने, कुन कुन आयोजनामा पुग्यो क्षति ?
काठमाडौं/ बाढीबाट क्षति पुगेका सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न रु दुई अर्ब बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण गत असार अन्तिम साता आएको बाढीले मुलुकका विभिन्न सिँचाइ प्रणालीमा क्षति पुर्याएको थियो ।
क्षति पुगेका सिँचाइ संरचनाको दीर्घकालीन मर्मतका लागि रु दुई अर्ब ११ करोड २२ लाख लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीबाट क्षति पुगेका सिँचाइ प्रणाली मर्मत तथा नयाँ निर्माण गर्न तत्कालीक रुपमा रु ३८ करोड २२ लाख लाग्ने भएको छ ।
बाढीलगत्तै सिँचाइ विभागले गरेको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
बाढीलगत्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायतले बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
बाढीले ती नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्कस, मुल नहर, शाखा नहर र विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो ।
क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ ।
सिँचाइ विभागले क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यायोजना तयार गरेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरिता दवाडीले बागमती नदीबाट भएको कटान तथा डुबान नियन्त्रणका लागि बागमती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २५० थान नाइलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु पाँच अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।
सङ्घीय सरकारले ठूला, प्रदेश सरकारले मझौला र स्थानीय सरकारले साना नदीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
सो रकममध्ये मन्त्रालयले रु पाँच करोड आवश्यकता अनुसार विभिन्न नदी नियन्त्रण गर्न विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ को झपा र मोरङ जिल्लाका विरिङ, कन्काई, रतुवा मावा (झापा), रतुवा मावा (मोरङ) कमल र मेची नदीले पुर्याएको क्षति पुनःनिर्माणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय नं १ झापामार्फत रु ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लालबकैया र बागमती नदीमा क्षति न्यूनीकरणका लागि रु एक करोड बाँडफाँड गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस